School Admin (Chinese Language) (Negotiable)
Stanford Canadian International School IT, Hardware, & Software
Enjoy Myanmar + School holiday.
• Ph.D(IT) / M.E (IT)/ MC (Tech) / M.E(IT)/ MCSC / M.I.Sc / MBA / Master in Business Management ရရှိထားသူများလျောက်ထားနိူင်သည်။• သင်ကြားမှုအတွေ့အကြုံ (၅)နှစ်နှင့် အထက် သူဖြစ်ရမည်။• သက်ဆိုင်ရာမေဂျာအလိုက် ICT/ Software/ Business Management ဘာသာရပ်များကိုကောင်းစွာသင်ကြားနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
• Teaching Skill ကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။• စိတ်ရှည် သည်ခံတတ်သူဖြစ်ရမည်။
Job Category: Education, Childcare & Teaching jobs Company Industry: Education / Training Employment Type: Other Full time: YES Job posted: 16/9/2019
Teacher (SLG Education) (Negotiable)
SLG HOLDINGS LIMITED (Real estate)
Understanding and reviewing the program/curriculum and required learning outcomes for the students.Working with other teachers to ensure that all students at this level are taught the same material based on the scope and sequence.Developing and working on the planner (yearly, weekly, and daily) for teaching the material.Teaching, assessing, evaluating students based on observation, class work, homework assignments, assessment, and their attitudes.Supporting, motivating and encouraging students in all aspects of school activities, onadaily basis.Assisting students in academic as well as social and behavioral growth by giving them numerous and varied learning opportunities.Meeting with parents, staffs and other professionals that work with the students to make sure the students develop at their best.Researching various teaching methods, information about students with special needs, and keeping abreast of teaching methodologies.Keeping anecdotal and other records using keeping systems as required by the school.Attending trainings and other professional development activities to constantly improve teaching skills and strategies.
Preschool Teacher - Weekend Part Time (Negotiable)
Stanford Canadian International School (Education management)
Primary Assistant Teachers (Negotiable)
George English Training Centre (Education management)
ဘာသာစကားသင်ကြားရေးမှ တစ်ဆင့် အဆင့်မြင့်ပညာရေးအတွက် အနာဂါတ်မျိုးဆက်သစ် လူငယ်များကိုဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီး မိမိကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားတတ်သော ကျောင်းသားလူငယ်မျာုးဖစ်လာစေရန် စဉ်ဆက်မပြတ် လေ့လာသင်ကြားပေးသောသင်တန်းကျောင်းအဖြစ် အတူတကွကြိုးပမ်းဆောင်ရွ... က်ရန်။Founded by Mr. George in 2007, GETC is well-known among well-educated family and hard-working personnel. We offer EnglishLanguage Courses for Preschoolers, Young Learners, Adult Learners, Cambridge Exam Preparation and Business English. We are dedicated to provide High Quality English Language Education. With proven teaching methods, highly qualified teachers, and international standard curriculum, we guarantee you outstanding result.သမာရိုးကျ သင်ကြားမှုပုံစံမျိုးမဟုတ်ပဲ Modern Teaching Methods ဖြင့် ကလေးငယ်များပို၍ Creative ဖြစ်လာစေရန်၊ Self-confidence ရှိလာစေရန်၊ Independent Learner များဖြစ်လာစေရန် နှင့် မိမိကိုယ်ပိုင်အရည် အချင်းများထုတ်သုံးတတ်ရန် စနစ်တကျ သင်ကြားပေးခြင်း။ Show more >
• သင်ရိုးညွှန်တမ်းနှင့် အညီသင်ခန်းစာများက...ို အခြားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် ပူးပေါင်းကာ ရေးဆွဲခြင်း။
ရက်တို/ ရက်ရှည် သင်တန်းနှင့် ခရီးစဉ်များတွင် ပါဝင်ခြင်း။ Show more >
• အသက် (၁၈) နှစ်ပြည့်ပြီး၊ ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိထားသူ ဖြစ်ရမည်။
• အသက် (၃၀)နှစ် အောက်ဖြစ်ရမည်။
• Private School သင်ကြားရေးနှင့် သက်ဆိုင်သော သင်တန်းတစ်ခုခုပြီးထားသူ ဖြစ်ရမည်။
• ကလေးချစ်တက်ရမည်။ သင်ကြားရေးကို အမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားပြီး ရေရှည်လုပ်ကိုင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
• သဘောထားပြည့်ဝ၍ စိတ်ရှည်ပြီး ကြိုးစားလေ့လာသင်ယူလိုစိတ် ပြင်းထန်ရ... မည်။• အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ပြီး ဘက်စုံ(လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၊ ကျောင်းသားများနှင့် ကျောင်းသားမိဘများ၊ လက်အောက် ငယ်သားများ) ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်ရပါမည်။ Show more >
1 C, 1st floor, shwe padauk condo, myay nu street,No.32, 1st floor, Yankin street, Myaynigone,Yangon, Myanmar
Preschool Class Teacher (Negotiable)
• ကလေးငယ်များ ဖွံ့ဖြိုးရန်လိုအပ်သော ကာယ၊ ဥာဏ၊ စာရိတ္တ၊ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံ ရေး စိတ်လှုပ်ရှားခံစားမှုသာမက ဘာသာစကားနှင့် ဘာသာစကားကို အခြေခံသော ပြောဆို ဆက်သွယ်ရေး ဖွံ့ဖြိုးမှုများကိုအားပေးလှုံ့ဆော်သော သင်ခန်းစာနှင့် activities များ စီစဉ် သင်ကြားပေးခြင်း။
• ကျောင်းသားတစ်ဦးချင်းစီ၏ လိုအပ်ချက်အညီအမှန်တကယ် အကျိုးရှိပြီးထိရောက်မှုရှိသော သင်ကြားရေး နည်...းလမ်းများ အသုံးပြု၍ သင့်လျော်သောသင်ခန်းစာများကို ပညာသင်နှစ်အလိုက်၊ လအလိုက်၊ ရက် အလိုက် စနစ် တကျပြင်ဆင် ရေးဆွဲပေးခြင်း။• သင်ခန်းစာပြင်ဆင်ချက် (Lesson Plan)ကို တစ်ပတ်ကြိုတင်ရေးဆွဲပြင်ဆင်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ အထက် အရာရှိ (သို့)တာဝန်ခံများသို့ တင်ပြပေးရမည်။ သင်ခန်းစာပြင်ဆင်ချက်(Lesson Plan)ကို ရေးဆွဲရာတွင် မိမိ သင်ကြားရမည့်အတန်း၏ အသက်အရွယ်၊ Learning Patterns နှင့်ကိုက်ညီမှုရှိအောင် သင်ရိုးစာအုပ်ရှိ သင်ခန်းစာ များကို ပြင်ဆင်ရေးဆွဲခြင်း၊ ကျောင်းရှိအထောက်အကူဖြစ်စေမည့် သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ အသုံးပြုခြင်း၊ online မှလိုအပ်သော သင်ခန်းစာများ ရှာဖွေစုဆောင်းအသုံးပြုခြင်းနှင့် မိမိကိုယ်ပိုင် တီထွင် ဥာဏ်ကို အသုံးပြု၍ သင်ခန်းစာ များကို စနစ်တကျပြင်ဆင်ရေးဆွဲခြင်း။• ကလေးငယ်များ၏ ကာယ၊ ဥာဏ၊ စာရိတ္တ၊ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှုစသည့်ဖွံ့ဖြိုးမှုများ နှင့် ဘာသာစကားနှင့် ဘာသာစကားကို အခြေခံသော ပြောဆို ဆက်သွယ်ရေးဖွံ့ဖြိုးမှုများ တိုးတတ်မှုနှင့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာတိုးတတ်မှုမှတ်တမ်းများအား သက်ဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်သူ၊ တာဝန်ခံများထံသို့ အပတ်စဉ်၊ လစဉ်၊ နှစ်စဉ် တင်ပြပေးခြင်း။ Show more >
• ECCD လက်မှတ်ရရှိထားပြီး၊ ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိထားသူ ဖြစ်ရမည်ဖြစ်ပြီးလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး(၁)နှစ် ရှိရမည်။
• ကလေးများအပေါ်အထူးစိတ်ရှည်သည်းခံပြီး၊ သဘောထားပြည့်ဝသူဖြစ်ရမည်။
• ကလေးဗဟိုပြု သင်ကြားရေးနည်းစနစ်ကိုနားလည်ရမည်။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကို ကျွမ်းကျင်စွာပြောဆို၊ရေး၊ဖတ်တတ်ရမည်ဖြစ်ပြီး Intermediate Level ရှိရမည်။
အခြေခံလစာမှာ (၃... ၀၀၀၀၀ မှ ၄၀၀၀၀၀အထိဖြစ်သည်) Show more >
Primary Teachers (Negotiable)
• ECCD လက်မှတ်ရရှိထားပြီး၊ သင်ကြားရေးဘွဲ့တစ်ခုခု ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။
• အသက် ၃၀ နှစ်အောက်၊ အနည်းဆုံး လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၂) နှစ် ရှိရပါမည်။
• Early Year Training ပိုင်းနှင့် Lesson Plan ရေးဆွဲနိုင်ရမည်။
• ဆန်းသစ်သော Idea များနှင့် Knowledge Skill ပြည့်ဝပြီး Learning Ways များ သိရှိရမည်။
• အထူးစိတ်ရှည်သည်းခံပြီး သဘောထားပြည့်... ဝပြီး ကလေးဗဟိုပြု သင်ကြားရေးနည်းစနစ်ကို အထူးနားလည်ရမည်။• ပြောဆိုဆက်ဆံရေး ဘက်စုံ(လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၊ ကျောင်းသားများနှင့် ကျောင်းသားမိဘများ၊ လက်အောက် ငယ်သားများ) ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်သူဖြစ်ပြီး အတန်းတွင်း စီမံအုပ်ချုပ်မှု စွမ်းရည်ရှိရမည်။• အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ပြီး သင်ယူလိုစိတ်အထူးပြင်းထန်သူဖြစ်ရပါမည်။• စာသင်ကြားရေးတွင် မိမိကိုယ်ကိုမိမိ ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိ၍ သင်ကြားရေး Method များသုံးနိုင်ရပါမည်။• Green Card ရှိသူများလည်း လျှောက်ထားနိုင်ပြီး Green Card ရှိသူအား ဦးစားပေးခေါ်ယူသွားပါမည်။ Show more >
Teacher (Junior Level) Brainworks Waizayantar Campus (Negotiable)
Brainworks -Total International Schools (Education management)
Please write not less than 50 words for each following question.
We would like to see your written communication skill as it is one of the requirement of this position.
Science Teacher (Higher Primary) (Negotiable)
S.D.E.C International School (Education management)
S.D.E.C International School
- Develop curriculum planning, schemes of work, detail lesson plans and assessment materials in accordance
with the established standard procedures of the school to create student-centered learning environment.
- Marking students’ work and provide appropriate feedback, encouraging and monitoring the progress of
individual students and use this information to adjust teaching strategies.
- Prepare classrooms for class activities and ensure classroom’s decoration, cleanliness and maintenance
of the facilities, raising students awareness with their investment.
- Maintain discipline by undertaking appropriate response or action in accordance with the rules and
disciplinary systems of the school.
- Assessing, recording and reporting on the development, progress and attainment of students to
- Demonstrate effective contribution in working with students from diverse cultural, economic, ability and
- Manage and Participate in extracurricular activities such as social activities, sporting activities, clubs,
campaigns and others as directed by the school.
- Contribute in other learning and development aspects of the students, such as, PSHE, Citizenship, Moral,
Cultural and Traditional values, promoting the all-round development of the students.
- Register students, accompany them to assemblies, encourage their full attendance and their participation in
other aspects of school life.
- Report to designated person about any difficulties in your work and make recommendations or
advices as to how these may be resolved.
- Follow teacher’s codes of conduct and act with professionalism all the time.
- Endeavour to give every child the opportunity to reach their potential and meet high expectations.
- Contribute to the corporate life of the school through effective participation in meetings and management
systems necessary to coordinate the management of the school.
- Undergoing regular observations and evaluation and show positive reflection towards appraisal feedbacks.
- Participate in regular in-service training as part of continuing professional development (CPD).
- Take part in marketing and liaison activities such as Open house, Parents Evenings and other events with
- Take responsibility and show accountability for any other duties as assigned by the school.
- Employees will be expected to comply with any reasonable request fromasupervisor to undertake work of
a similar level that is not specified in this job description.
In addition, it may be amended at any time after consultation with you.
Qualifications : A degree plus2years teaching experience
(Having international teacher training certificate will be an advantage.)
Other skills : Must be fluent in English
(Having Computer skills will be an advantage.)
Working Hours – 8:00 am to 3:00 pm (Monday to Friday)
- The Job post is for both locals and foreigners.
- Salary may be negotiated on individual basis.
- Applicants must bringaCV and originals of qualifications on the day of interview.
Rewards for good performance, Bonus
Fun Working environment, Makeadifference
Training provided, Learn new Skills on the job, Promotion opportunities.
SDEC was established in 1999. SDEC started withasmall pre-school class and since then, it has gained the trust and support of the people. Today, we have become one of the popular private international schools in Myanmar providing quality education. SDEC is running pre-school, kindergarten, primary and secondary schools with expert and well-qualified teachers. SDEC also has Weekend English Proficiency Classes and IGCSE Exam Preparation Classes. SDEC prescribes UK and Singapore Syllabuses. There are two semesters in one academic year, commencing from May to February.
Facilities Manager (Negotiable)
We are seeking an experienced facilities manager to runasupport services team with inabusy school environment. The successful candidate must haveasupport services background (eg. security, cleaning, catering, etc.) and have led teams providing these services into challenging environments.
1. Overseeing contracts and providers for services including security, cleaning, M&E, pest control, waste disposal and recycling.
2. Supervising multi-disciplinary teams of staff including cleaning, maintenance and security.
3. Ensuring that basic facilities, such as water, heating, A/C are well-maintained.
4. Managing budgets and stock and ensuring cost-effectiveness.
5. Ensuring that facilities meet government regulations and environmental, health and security standards.
6. Advising on increasing energy efficiency and cost-effectiveness.
7. Use performance management techniques to monitor and demonstrate achievement of agreed service levels and to lead on improvement.
8. Respond appropriately to emergencies or urgent issues as they arise and deal with the consequences.
9. Lead all Health, Safety & Fire fighting issues.
 Education : Bachelor degree (or equivalent) - preferable
 Language : English mandatory; Good written and spoken ability.
 Computer skills : Medium-advanced with Microsoft office, emails and the Internet
 Experience : Management preferably in Facilities management and support services.
 Autonomous, flexible and able to work under pressure
* International Standar
Student Care Coordinator (Negotiable)
Seezar Soesan Group of Companies (Business supplies and equipment)
- နေ့စဉ် ကျောင်းတက်ရာခိုင်နှုန်းများကောက်ယူခြင်း၊ ကျောင်းတက်ရာခိုင်နှုန်းများအား စစ်ဆေးတွက်ချက်ခြင်း။
- စာသင်ချိန်မတိုင်မှီ အတန်းအတွက်လိုအပ်သည်များ ပြင်ဆင်ခြင်း။
- စာသင်ချိန်အတွင်း ကျောင်းသား/သူများ၏ စည်းကမ်းလိုက်နာမှုအား ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်း။
- Presentation အတွက် စာသင်ခန်းအား အချိန်မီ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ Class test များအား ကြီးကြပ်ပေးခြင်း။
- Lecturer များ၏ လိုအပ်ချက်များအား ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
- Student Feedback များ ကောက်ယူခြင်းနှင့် တွက်ချက်ခြင်း။
- စာသင်ခန်းအတွင်းရှိ facilities များအား အမြဲမပြတ် စစ်ဆေးကြည့်ရှုပြီး လိုအပ်သော ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဖြည့်စွက်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
- External Verifier Visit ရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ Supervisor အား ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
- အစည်းအဝေးများအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် Internal staff meeting များအား တက်ရောက်ပြီး အလှည့်ကျ မှတ်တမ်းရေးသားခြင်း။
- ကျောင်းသား/သူများ၊ Lecturer များ၏ Feedback များအား နားထောင်၍ သက်ဆိုင်ရာ Supervisor အား ပြန်လည်တင်ပြခြင်း။
- Student Personal File များအား အချက်အလက်စုံလင်စေရန် စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခြင်း။
- Student Control List အား အမြဲမပြတ် Update လုပ်ပေးခြင်း။
- Practical, site visit နှင့် internship များအား လိုအပ်သလို ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ပြီး Supervisor အဖြစ် လိုက်ပါခြင်း။
- ကျောင်းပွဲ၊ အခမ်းအနားများအား လိုအပ်သလို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
- ISO နှင့် ပတ်သက်သည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ စာရွက်စာတမ်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
- ISO Internal Audit နှင့် External Audit များ ရှိပါက ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်း။
- အခြား Department များနှင့် လိုအပ်သည်များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။
- အင်္ဂါနေ့တိုင်း သက်ဆိုင်ရာ Supervisor ထံသို့ Weekly report ပေးပို့ခြင်း။
- သက်ဆိုင်ရာ Supervisor မှ လိုအပ်သလို ထပ်မံပေးအပ်သည့်တာဝန်များအား ဆောင်ရွက်ခြင်း။
- တက္ကသိုလ်တခုခုမှ Bachelor ဘွဲ့ရပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။
- Microsoft office အား ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုတတ်ရမည်။
- Internet၊ Email အသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
- English4skills အသင့်အတင့်ရှိရမည်။
- အဖွဲ့အစည်းနှင့် လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
- စကားပြောချိုသာယဉ်ကျေး၍ ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူ ဖြစ်ရမည်။
PR Executive (Negotiable)
Myanmar International School Yangon (Non-profit organization management)
- Organising and arranging attendance for promotional events such as press conferences, open days, exhibitions, tours and visits
- Organising for staff members to speak publicly at interviews, press conferences and presentations
- Providing SLT and BOD with information about new promotional opportunities and current PR campaigns progress as required
Liaising with relevant staff about budgets, timescales and objectives
Supporting the development of the School website.
Creating and analysing questionnaires
Assisting in the creation of school brochures, posters and similar documents for distribution
Organising and hosting presentations and visits of potential parents
Helping to organise and analyse market research
Maximising the potential for marketing and promoting MISY on social media sites and the Internet generally.
Identifying potential marketing opportunities for MISY
- A degree inarelated subject.
- A recognised PR qualification
- General PR experience.
- Experience of liaising with the local media and relevant external organisations asameans of promoting the school.
- Experience in the use of social media for promotional purposes.
- Experience of planning and delivery of PR projects
IGCSE Math Teacher (Negotiable)
EMPS International School (Education management)
IGCSE English Teacher (Negotiable)
Store Keeper (Negotiable)
BFI Education Services Co., Ltd (Education management)
နေ့စဉ် စတိုတွင်းသို့ ပစ္စည်းများဝင်ခြင်း၊ စတိုတွင်းမှ ပစ္စည်းများထုတ်ခြင်းအတွက် Entry & Issued Register လုပ်နိုင်ရမည်။
Store Ledger အတွင်းသို့ ပစ္စည်းအ၀င်အထွက် စာရင်းသွင်းခြင်း၊ Stock ထားရှိမှုအခြေအနေအား လိုအပ်သလိုပြင်ဆင်ခြင်းများ မှန်ကန်မှုရှိအောင် ဆောင်ရွက်ရမည်။
အထက်လူကြီး ညွန်ကြားချက်များကို ကောင်းစွာလိုက်နာနိုင်ရမည်။
ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ပြီး သွက်လက်ဖျတ်လတ်၍ အသက် (၂၀ မှ ၃၀) အတွင်း အမျိုးသမီး ဖြစ်ရမည်။
Any Graduate (or) အထက်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။
Working Hours - 8:30 AM to 5:00 PM (Monday to Friday)
8:30 AM to 4:00 PM (Saturday)
Sunday & Gazatte Day, Special Holidays
Preschool Teacher (Negotiable)
A degree holder with2years teaching experience in international Preschool.
(have international teacher certificate will be an advantage)
Can be able to work under yearly contract (May 2017 to March 2018)
• Planning, preparing and presenting lessons that cater for the needs of the whole ability range within the class and delivering lessons toarange of classes of different ages and abilities.• Assessing, recording and reporting on the development and progress of pupils.
• Promoting the general progress and well-being of individual pupils and of any class or group of pupils assigned to.• Supporting pupils on an individual basis through academic or personal moral difficulties.• Supervising and supporting the work of teaching assistants and trainee teachers.• Coordinating or managing the work of other teachers.• Providing feedback to parents onastudent’s progress at parents meetings.
GENERAL DUTIES• Maintaining the discipline of classroom and treat all students on one level.• Motivating students with enthusiastic, imaginative presentation.• Monitoring corridors, playground and extra-curricular activities.• Maintaining up-to-date subject knowledge and devising new curriculum materials.• Participating in and organizing extracurricular activities, such as camps, social activities and sporting events.• Participating in meetings and school training events.
Preschool Mentor Teacher (Negotiable)
Preschool Chinese Teacher (Negotiable)
School Administrative Staff (Negotiable)
Assisting school tasks. Customer service. Executing administration of school and staff jobs. Team worker personality.
5. Basic English (4 skills)
6. Computer skills (excel, word, ppt)
7. Have experience in advance.
1. Open-minded and optimistic image.
2. Confidence, initiative and patient personality.
3. Like challenge.
Academic Support Manager (Negotiable)
for General Manager/Principal (Program)
Pans, develops, manages and evaluates for education training center setup and operations.
Communicate and dealing to international schools and private schools for education development programs and industry-supported meeting.
Able to work together with international team members and also lead the internal team in operation process.
Consult to parents regarding their student's education and make engaging programs (seminar, events, competition events).
Organizing the sales team for presentation to International Schools and Private Schools.
Manage to reach the possible sales target and report to BODs by weekly, monthly.
Responsible for reviewing and reporting on the work plan, overseeing detailed task management, monitoring activities of the sales and operation team.
Any Bachelor degree/More preferable with Master Degree.
Over5years' experience in educational management background, interesting for e-learning platform development programs for the nationwide students.
Problem solving ability, good initiative, and positive attitude.
Proficiency in Microsoft Word, Excel, Email, and Internet as needed.
Ability to adapt and respond to urgent needs or changes, good time management and prioritizing skills.